छोरा नहुँदैमा के भयो र ? – " सुलभ खबर "
जनकपुरधाम : छोरै किन चाहियो ? छोरी भए हुँदैन ? अझै धेरैले भन्छन्, ‘म’र्दा कसले दागबत्ती दिन्छ ? कसले कि’रिया गर्छ ? ’ समय बदलियो। नयाँ पुस्ता बरु पुरानै सोचमा हुँदा मधेसका ज्येष्ठ महिला त्यो धारणा बदल्न कस्सिएका छन्। र, छोरीले अन्त्येष्टि गर्ने क्रम बढेको छ।
तर, शीतलीले मानिनन्। हिम्मतसाथ भनिन्, ‘छोरीहरूले बुवालाई अन्तिम समयसम्म हेरचाह गरे। उनीहरूले दा’गबत्ती दिन्छन्। उनीहरूले कि’रिया गर्छन्।’
आउनुहोस्, ८० वर्षीया शीतलीदेवी साहको यस्तो ‘वि’द्रोह’ को सम्मान गरौं। जनकपुरधाम–७ जानकी नगरकी शीतलीदेवीका पति सय वर्षीय मुखिया साहको अघिल्लो शनिबार निध’न भयो। तीन छोरीकी आमा शीतलीका आफन्त र समाज मु’खामुख गर्न थाले, ‘मुखाग्नि कसले दिने ? ’
उनीहरूले आफूखुसी निर्णय गरे– भतिजाबाट अन्तिम संस्कार गराउने। तर, शीतलीले मानिनन्। हिम्मतसाथ भनिन्, ‘छोरीहरूले बुवालाई अन्तिम समयसम्म हेरचाह गरे। उनीहरूले दा’गबत्ती दिन्छन्। उनीहरूले कि’रिया गर्छन्।’
श’व बोकेर तीन छोरी र एक नाति म’सानघाट हिँडेको दृश्यले टोलवासी स्त’ब्धभन्दा बढ्ता चकित भए। र, मलामी जान तयार भएका धेरै घरभित्रैै छिरेर ढोका लगाए।
घरमा आइसकेका केही मान्छे यता–उता लागे। मुखियाको श’वलाई तीन छोरी बेचनीदेवी, बुधोदेवी, फूलकुमारी र नाति अनुरागले काँधा दिए (बोके)। छोरीहरूले काँधा दिएकै कारण उनका नातेदार जति मलामीमा सहभागी हुनुपर्‍थ्र्यो, त्यति आएनन्।
वृद्धा शीतलीदेवी हातमा गुइँठा (जुन दाग’बत्ती दिन प्रयोग गरिन्छ) र उतरी (दा’हसंस्कारपछि लगाउने लुगा) लिई अगाडि–अगाडि थिइन्। पछाडि उनका सय वर्षीय पतिको श’व बोकेर तीन छोरी र एक नाति म’सानघाट हिँडेको दृश्यले टोलवासी स्त’ब्धभन्दा बढ्ता च’कित भए। र, मला’मी जान तयार भएका धेरै घरभित्रैै छिरेर ढोका लगाए।
‘उहाँ एक वर्षदेखि बिरामी हुँदा कोही हेर्न÷भेट्न आएनन्,’ पतिको कि*रिया बसेकी शीतलीले भनिन्, ‘छोरीहरू यही कोखबाट जन्मिएका हुन्। छोरा नहुँदैमा के भयो र ? उनीहरूले कि’रिया गर्न किन नहुने ? ’
त्यसो त मुखिया साहलाई पनि जीवनको अन्तिम घडीमा चि’न्ता त्यही थियो– मलाई कसले दा’गबत्ती देला ? ‘बुवा अन्तिम अवस्थामा हुँदा मलाई कसले आगो दिने भनेर सधैं बि’लौना गर्नुहुन्थ्यो,’ कान्छी छोरी बुधोले आँसु पुछ्दै सुनाइन्, ‘हामी भन्थ्यौं– चिन्ता नगर्नुस्, हामी गर्छौं सबै। र, बुवाको अन्त्ये’ष्टि गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि भइरहेको छ।’
त्यही दिन अर्थात् अघिल्लो शनिबार जनकपुरधाम–१९ बेंगाशिवपुरका कृष्णा यादवको ३२ वर्षकै अल्पा’युमा मृ’त्यु भयो। दुई छोरी मात्रै भएका यादवको दा’हसंस्कार ९ वर्षीया छोरी रागिनी यादवले गरिन्।
यसअघि धनुषाको सबैला नगरपालिका–२ का ६५ वर्षीय रामनारायण यादवको मृ’त्यु हुँदा उनका पाँच छोरी नेतुर, राजोदेवी, प्रमिलादेवी, अनितादेवी र गोरकीले बुवाको श’वलाई काँधमा बोकेर घा’टसम्म पुर्‍याए। रामनारायणको पा’र्थिव शरीरमा उनकी ६२ वर्षीय पत्नी रवियादेवी यादवले दा’गबत्ती दिएकी थिइन्।
‘छोराले अन्तिम संस्कार गरेनन् भने मुक्ति नहुने जस्ता वि’डम्बना पालेर बसेको हाम्रो समाजमा महिलाको यस्तो कदमले वि’भेद अ’न्त्य गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
मधेसमा छोरीले बुवालाई दागबत्ती दिनु निकै साहसिक कार्य रहेको स्थानीय नेता सीताराम यादव बताउँछन्। ‘छोराछोरीप्रति वि’भेद गर्ने रू’ढिवादी सोचलाई छोरीहरूले नै निरुत्सा’हित गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘समाज बदलिने यसरी नै हो।’
दा’हसंस्कार नै पत्नी र छोरीहरूबाट हुन थाल्नु ठूलो परिवर्तनको उदाहरण रहेको जनकपुरधाम–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साह बताउँछन्। ‘उनीहरू निकै गरिब परिवारका हुन्। छोरीहरूले पढेलेखेका छैनन्, न त आमा नै। तर, चेतनाको स्तर निकै ठूलो रहेको यो घट’नाले प्रमाणित गर्छ,’ शीतलीदेवीको उदाहरण दिँदै वडाध्यक्ष साहले भने, ‘छोराले अन्तिम संस्कार गरेनन् भने मुक्ति नहुने जस्ता वि’डम्बना पालेर बसेको हाम्रो समाजमा महिलाको यस्तो कदमले वि’भेद अन्त्य गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
केही महिनाअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ का राजेशकुमार ठाकुरको मृ’त्यु हुँदा कान्छी छोरीले अन्तिम संस्कार गरेकी थिइन्। प्राध्यापन पेसामा रहेका ठाकुरले सिकि’स्त बिरामी भई थला पर्दा पत्नीलाई छोरीहरूबाटै दाग’बत्ती दिलाउन बाचा गराएका थिए।
सन्तानलाई आमाबाबुको दा’हसंस्कार गर्ने अधिकार रहेको पण्डित बच्चा झा बताउँछन्। ‘पितृसत्तात्मक समाजमा छोरीलाई दोस्रो दर्जा दिएकै कारण उनीहरूलाई आमाबुवाको अन्तिम सं’स्कार गर्न बन्देज लगाइँदै आइएको हो,’ उनले भने, ‘यो अधिकार दुवैलाई हुनुपर्छ।’ यो खबर मनिका झाले अन्नपुर्ण पोष्ट